Ankizy Botilisma | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Toxic vokatry ny tantely sy siramamy ahitra amin'ny zazakely
Tsy misy tantely sy tsiranoka ahitra mandra-pahatongan'ny 1. fitsingerenan'ny andro nahaterahana
Ny aretina tsy dia mahazatra loatra fa tena goavana amin'ny zazakely dia ny botulism zaza. Botulism dia avy amin'ny teny latinina botulus (saosisy), ilay antsoina hoe hena fanapoizinana, ary ny fiainana mandrahona, ny botulinum toxin (Clostridium botulinum bakteria) nahatonga ny fanapoizinana.
Botilisma an-tsafin'ny tantely na siramamy
Amin'ny maha-mpanohana ny toaka dia ny tantely na siramamy ahitra hanamboarana z. Raha antsoina ny teas na ny bozaka kely. Ny tantely dia manandrana mamy mahafinaritra ary sakafo mahasalama, izay ampiasaina amin'ny tanjona ara-pitsaboana. Manana fahasalamana marobe ny jasely volamena ary tsy azo alaina an-tsoratra io sakafo io. Mba hamonoana ny bakteria dia tsy maintsy asiana rano mihoatra ny 120 ° degrees mandritra ny fotoana maharitra. Tsy azo atao amin'ny tantely izany. Izy dia vokatra voajanahary ary noho izany dia natolotra ihany koa izy tao amin'ny fivarotana.
Ny Botulisme Ankizy - Zava-doza ho an'ny zazakely amin'ny alalan'ny tantely
Ny sakafo voatahiry na voa-tombo-kase, anisan'izany ny tantely na sôpôla maromaro voapoizina amin'ny toeram-pandehanana, dia mamorona ny bakteria ny spores ary miditra ao amin'ny flora intestinal amin'ny fanindroany.
Ao amin'ny zazakely hatramin'ny herintaona, ny tena mora 6 volana, ary kokoa miovaova vatana fiarovana sy ny malemy tsinay zavamaniry, dia zava-mahafaty nentina ny alalan 'ny tsinay septum ho any amin'ny lalan-dra, ary avy any dia teo amboniny mahazo ny kozatra fiafarana ao amin'ny peripheral rafi-pitatitra izay ny famotsorana lehibe neuronal Tsy misy ny fanafody iraisana.
Ny vokatra misy poizina dia manakana ny fanasongadinana ny hafanana sy ny hozatra. Ny nalemy rehetra mandady vatana sy ny taova faritra ary hampitsahatra ny intestin lehibe no vokany. Ny vokatry ny toxin foana dia tsy afaka nahatsikaritra ary matetika ny soritr'aretina dia fantatra ihany rehefa afaka andro na herinandro. Fanalefahana ny maso hozatry, tsy endrika maneho hevitra, nalemy ny respiratoire hozatra ka ny havitsin'ny ny fofonaina ary ny fitsaharana ny fifohana rivotra, mitelina, ary ny hozatra fahalemen'ny musculoskeletal rafitra no famantarana ny fanapoizinana amin'ny alalan'ny botulinum, ary mety hitarika ho faty raha tsy avy hatrany, vonjy taitra sy mafy fikarakarana. Azo atao ny manasitrana ny fitsaboana manontolo, saingy tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny fahasimbana mety.
Isan-taona dia misy tranga iray momba ny botulism ny zazakely dia nambara tamin'ny Robert Koch Institute any Berlin. Ny fanadihadiana momba ity karazana fanamafisana ity sy ny vokany dia natao tany Eorôpa hatramin'ny 1976, taorian'ny tranga voalohany ary hita fa hita tany Amerika. Maro ny tranga niseho tany Aostralia, Etazonia ary ny toeram-ponenana japoney. Misy koa ny fifandraisana amin'ny sendikà fahafatesana tampoka. Any Eoropa, misy ny adidy hanambara eo ambanin'ny Lalàna fiarovana ny fiarovana.
Ho an'ny fahasalaman'ny zaza, mandra-pahatongan'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, dia tokony hivoaka miaraka amin'ny fanomezam-boninahitra tantely sy siramamy ahitra mba hisorohana ny loza mety hitrangan'ny botulism amin'ny zaza tsy hiditra.
Ao amin'ny zaza, ny ankizy, ny tanora sy ny olon-dehibe, ary miasa amin'ny fomba feno zavamaniry sy ny ara-pahasalamana tsinay tsinaibe septum, ny toxin dia excreted, raha tsy izay miditra ny ra amin'ny tena, araka ny mitranga amin'ny alalan'ny izay misy amin'ny fatrany ambany tantely. Ny fanoratana ny poizina amin'ny renim-pianakaviana izay nandray tantely dia tsy nomena.
Ankoatra izany, ny fitsaboana sy ny fanasitranana ny tendron-tsakafo miaraka amin'ny tantely dia ny fery. Amin'ny ankapobeny, tokony ho marihina fa tokony hialana amin'ny sakafom-bovidin-tsakafo, ny alikaola ary ny dite / misotro matetika amin'ny ankapobeny, satria mety miteraka sy miteraka loza na aretina hafa izany.
Raha ny marina, ny tranga voalohany momba ny botulism zazakely dia hita tao 1976 tany Californie. Any Alemana, dia misy tranga toy izany isan-taona nanomboka tamin'ny 1996. Ao amin'ny fantsom-bokatry ny tovovavy misy poizina misy poizina. Na izany aza dia mety hijanona kely andro vitsivitsy isan-kerinandro izy mba hahitana ny soritr'aretina. Noho izany dia sarotra ho an'ny dokotera ny mamaritra ny fifandraisana eo amin'ny sakafo sy ny aretina. Raha miditra ao amin'ny ratra ao anaty rà ny toaka, dia zaraina ao amin'ny vatana izany. Mifanaraka amin'ny fiafaran'ny neritreretana izy io ary manakana ny dingana manan-danja ao, toy ny hozatry ny hozatra. Ny vokatr'izany dia lolom-po. Indrisy anefa, toy ny olon-dehibe iray, tsy afaka mitondra ny zaza miaraka amin'ny antitoxin ianao.